Malunga nathi -Topshine Auto Parts (NanChang) Co., Ltd.
Topshine izahlulo auto mveliso yenye abenzi zobungcali irabha izithuthi kunye nokumiswa e-China, neyasekwa ngo-2006. Sinikeza uluhlu olubanzi lwendawo zerabha ezizenzekelayo (IiNjini zeeNjini,Ukunyuka kwe-Strut Mounts / Shock absorber Mounts, Ukunikela iZiko,Umbhobho womoya / irabha yombhobho,Ukuphucula) kunye namalungu okumiswa okuzenzekelayo (Ulawulo lweengalo,Ukudibanisa ibhola,Ukuphelisa intambo,Ukuphela kweRack,Umnqamlezo / Qhagamshela iZiko,Ikhonkco lokuzinzisa,Idler Ingalo,Pitman Ingalo). Ke unokuzifumana ngokulula iinxalenye ezikumgangatho ophezulu ozifunayo ngexabiso eliphambili. Xa uthenga iinxalenye ezizenzekelayo kwi-intanethi www.topshineparts.com Unokuqiniseka ukuba uya kufumana ixabiso eliphezulu lehoseyile lezinto ezizenzekelayo, kwaye zonke iindawo esizithengisayo zinewaranti epheleleyo. Siyakuqonda nokuba kubaluleke kangakanani ukufumana iindawo ezifanelekileyo xa uthenga izixhobo ezizenzekelayo kwi-intanethi. Kungenxa yoko le nto onke amacandelo ethu ezinikezele ekuchaneni ngokuchanekileyo esiqinisekisa ngako.
I-Topshine iqhutywa yinkqubo yolawulo ye-TS16949. Iimveliso zethu zinokuveliswa ngokweemfuno zabathengi kwaye zibonelele ngokugqibeleleyo emva kokuthengisa. Iimveliso zithunyelwa eUnited States, eYurophu, Middle East, Australia, Japan, Latin America kunye namazwe angaphezu kwama-30 kunye nemimandla. Sithengisa zonke iintlobo zamalungu azenzekelayo, kubandakanya iToyota, iHonda, iMazda, iMitsubishi, iHyundai, iFord, iVolkswagen, iMercedes Benz, iBMW, iAudi, iChevrolet, iLand Rover, njl. Njl. ukufumana ukuvunywa nokwamkelwa kwilizwe liphela. Ukukhanya okuphezulu ngumthengisi wakho onokuthenjwa. Ukuba awufumani ulwazi oludingayo, nceda usitsalele umnxeba ku-18070095538 uShirley okanye usithumelele i-imeyilesales@topshineparts.com Siyavuya ukukunceda ufumane iindawo ozifunayo kwaye masiqale ukukusebenzela.
Abathengi bethu kunye namaqabane
Sizimisele kakhulu kuyo yonke iodolo, eyifilosofi yethu ethi iTopshine ihlala ikhuthaza. Sinoqinisekiso lomgangatho kwimveliso yezinto zokwenza imveliso ezigqityiweyo. Izixhobo kunye nemveliso yeodolo nganye, kunye nokupakishwa, iilebheli, ukupakisha, iipelethi kunye nokugcina iimveliso, kwaye ekugqibeleni iimpahla zifika ezandleni zakho. Silandela yonke inkqubo kwaye sinikezela ngeengxelo, imifanekiso kunye neevidiyo kubathengi ngokweemfuno zabathengi. Iwaranti yethu igubungela iimveliso ezithunyelwa kuthi ezivela kuthi ga ixesha leminyaka emi-2. Iimveliso zethu zinokuveliswa ngokweemfuno zabathengi kwaye zibonelele ngokugqibeleleyo emva kokuthengisa.
• Isiqinisekiso / iwaranti
• Iimpawu zeMveliso
• Ukusebenza kweMveliso
• Ukuhanjiswa ngokukhawuleza
• Ukuvunywa komgangatho
• Kwamkelwe iiOld Orders